I-Apple ifikelela kwisivumelwano nomenzi omkhulu weeinjini zomoya | IPhone iindaba
I-Apple ifikelela kwisivumelwano kunye nomenzi omkhulu wee-injini zomoya
Kutshanje iApple ifikelele kwisivumelwano neXinjiang Goldwind Science kunye neTekhnoloji, eyaziwa ngokuba lelona lizwe likhulu elenza oomatshini bomoya. Oku kuyakuthetha ukufika kwamandla acocekileyo kwiinkqubo zemveliso nakwimveliso yokuvelisa izixhobo ezinxulumene neApple e China, ngokolwazi olupapashwe kwi South China Morning Post.
Ngokukodwa, inkxaso-mali yoTyalo-mali eNtsha yaMandla eBeijing, ngokupheleleyo eyeGoldwind, iya kugqithisela iipesenti ezingama-30 zeenkampani ezine kule projekthi ziye eApple. Inkxaso-mali yeGoldwind igxile kulwakhiwo nasekusebenzeni kweefama zomoya kwaye iqinisekile ukunceda iApple kwinkqubo yokubonelela ngamandla acocekileyo kwiindawo zayo ezininzi zemveliso ye-iPhone kwingingqi, ngokunokwenzeka kubandakanya abenzi abaziwayo abanjengoFoxconn kunye noPegatron.
Iinkcukacha malunga nokuba ngubani umthengisi kunye nemali eza kusetyenziswa ngu-Apple kule projekthi azichazwanga. Kwingxelo ethunyelwe kwiHong Kong Stock Exchange izolo yiGoldwind, nalapho ikwatyhila umanyano lwayo neApple, kwakhankanywa ukuba nganye yeeprojekthi iya kuba namashishini amanyeneyo, abizwa ngokuba "ngamashishini adibeneyo", ke ngekhe kuxhomekeke okanye kuchaphazela kuphela iimali zikaGoldwind. Zombini iGoldwind kunye neApple ziya kuba nobukho obulinganayo "njengoko izinto ezibalulekileyo ziya kufuna ukwamkelwa ngazwi linye kwabalawuli babo."
I-Apple ibisoloko ingummeli wamandla acocekileyo kunye nobuhlobo bokusingqongileyo ngokubanzi. Kulo nyaka ujoyine inyathelo lamandla ahlaziyiweyo le-RE100 kwaye uqhubekile nokufaka izingxobo zeplastikhi kwiivenkile zalo zentengiso ngeengxowa zamaphepha ezenziwe nge-80% yezinto eziphinda zasebenza. Ukusebenzisana ne-Goldwind linyathelo elitsha kwiinzame zika-Apple zokuzisa amandla acocekileyo kwiinkqubo zokuvelisa amaqabane akhe. Kunyaka ophelileyo ibhengeze ukufakwa kwezixhobo zamandla elanga ezimegawathi ezingama-200 kwimimandla esemantla, empuma nakwindawo ezisemazantsi e-China, kunye nokukhuthaza amaqabane asebenza ngamandla afana neFoxconn.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Apple ifikelela kwisivumelwano kunye nomenzi omkhulu wee-injini zomoya
I-Bluetooth 5 ngesantya esiphindwe kabini sokudlulisa kunye noluhlu olukhulu olusele lusezandleni zabavelisi
I-Apple Pay yandisa uluhlu lwayo lweebhanki ezifanelekileyo, kodwa hayi eSpain